FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBolivia Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yaseQuebec Intetho Yezandla yaseRashiya Isi-Iban Isi-Ibanag Isi-Ibinda Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAbbey IsiAbkhaz IsiAbui IsiAcholi IsiAlbania IsiAlur IsiArabhu IsiArmenia IsiAssamese IsiAttié IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBambara IsiBaoule IsiBashkir IsiBasque IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseSimalungun) IsiBatak (SaseToba) IsiBelize Kriol IsiBengali IsiBhulu IsiBiak IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiChuukese IsiChuvash IsiCibemba IsiCinamwanga IsiCinyanja IsiCreole SaseBissau Guinea IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDamara IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDayak Ngaju IsiDigor IsiDrehu IsiEdo IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGalician IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiGuéré IsiHausa IsiHebhere IsiHerero IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiJula IsiKabuverdianu IsiKabyle IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKekchi IsiKhana IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKipende IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKosrae IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLenje IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLomwe IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiMacua IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMapudungun IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMixe IsiMizo IsiMongolia IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNavajo IsiNdau IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNyaneka IsiNyungwe IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiOtomi (SaseMezquital Valley) IsiPalau IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPonapea IsiPunjabi IsiPunjabi (SaseShahmukhi) IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuiche IsiQuichua (SaseChimborazo) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiRomany (Macedonia) Cyrillic IsiRomany (saseMacedonia) IsiRotuman IsiRunyankore IsiRutoro IsiSamoa IsiSangir IsiSango IsiSena IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSunda IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTamil IsiTandroy IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTongan IsiToraja IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUighur (sesiCyrillic) IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiUruund IsiUzbek IsiValencian IsiVezo IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYacouba IsiYoruba IsiZande IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isi-Igbo isiGokana isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
Ukuzazi ukuba ungubani nokuba yintoni elungileyo kuwe kuya kukunceda wenze izigqibo zobulumko xa unyanzelwa ukuba wenze okuphosakeleyo.
Khawucinge ngoku: Kungekapheli nemizuzu elishumi uKaren efikile epatini, uva ilizwi lomntu amaziyo.
“Umele ntoni apho?”
Xa ejika uKaren ubona umhlobo wakhe uJessica ethe qhiwu iibhotile ezimbini ezisandul’ ukuvulwa. Uyazi ukuba butywala. UJessica unika uKaren enye ibhotile aze athi, “Awungomntwana wethu, khawonwabe!”
UKaren uyafuna ukwala, qha uJessica ngumhlobo wakhe. Ibe akafuni acinge ukuba akalandeli. Eny’ into uJessica ngomnye weentombi ezilungileyo. Ngoko ukuba uyasela, mhlawumbi akuphosakelanga kangako. UKaren uzixelela oku, ‘sisiselo nje qha, akufani nokusebenzisa iziyobisi.’
Ukuba ubunguKaren, ubunokwenza ntoni wena?
Ukuze wenze izigqibo zobulumko kule meko, umele uqale uzazi. Ukuzazi kuthetha ukwazi ukuba ungubani nokuba yintoni elungileyo kuwe. Xa uzazi ngolo hlobo, unako ukulawula ubomi bakho kunokuba uvumele abanye bakulawule.—1 Korinte 9:26, 27.
Unokukwenza njani oku? Ungaqala ngokuphendula le mibuzo ilandelayo.
1 ZIINTONI ENDIKWAZIYO UKUZENZA?
Ukwazi ubuchule onabo neempawu zakho ezintle kunokukwenza uzithembe.
UMZEKELO OSEBHAYIBHILENI: Umpostile uPawulos wabhala wathi: “Nokuba andinabuchule ngentetho, ngokuqinisekileyo andinjalo ngolwazi.” (2 Korinte 11:6) Ukuzazi kakuhle iZibhalo kwanceda uPawulos wakwazi ukuxhathisa xa abanye babemchasa. Akazange avumele ukugxekwa ngabo kumenze angazithembi.—2 Korinte 10:10; 11:5.
ZAZI: Bhala italente okanye ubuchule onabo.
Ngoku bhala uphawu onalo oluhle. (Ngokomzekelo, ngaba unobubele? uthanda ukupha? unokuthenjwa? uyalibamba ixesha?)
2 ZIINTONI ENDIBUTHATHAKA KUZO?
Ubuntu bakho bungatshintsha bube bubi ukuba uvumela ubuthathaka bakho bulawule ubomi bakho.
UMZEKELO OSEBHAYIBHILENI: UPawulos wayebazi ubuthathaka bakhe. Wabhala wathi: “Ngokwenene ndiyayoliswa ngumthetho kaThixo ngokomntu endinguye ngaphakathi, kodwa ndibona omnye umthetho emalungwini am usilwa nomthetho wengqondo yam yaye undithimbela emthethweni wesono.”—Roma 7:22, 23.
ZAZI: Bubuphi ubuthathaka ofanele uboyise?
3 ZIINTONI ENDIZIMISELE UKUZENZA?
Ngaba ubunokukhwela iteksi uze uxelele umqhubi wayo ukuba ajikeleze nawe de iphelelwe yipetroli? Ibiya kuba bubudenge —nokudlala ngemali oko!
Sifunda ntoni? Ukuyazi into oyifunayo kukunceda ungemi ndawonye ebomini. Uyazazi ukuba uyaphi nendlela oza kufika ngayo apho.
UMZEKELO OSEBHAYIBHILENI: UPawulos wabhala wathi: “Indlela endibaleka ngayo asiyiyo eyokungaqiniseki.” (1 Korinte 9:26) Kunokuba aphile ngamabonandenzile, uPawulos wayenenjongo ecacileyo ebomini yaye wayephila ngokuvisisana nayo.—Filipi 3:12-14.
ZAZI: Bhala izinto ezintathu ongathanda ukuziphumeza ungaphelanga unyaka ozayo.
4 ZIINTONI ENDIZIKHOLELWAYO?
Xa uzazi kakuhle, ufana nomthi oneengcambu ezendeleyo onokumelana nezaqhwithi ezikhulu
Xa zingekho izinto ozikholelwayo, uya kulala neli uvuke neliya. Uya kuba yintaka-mpuku esoloko ifuna ukwamkelwa ngabahlobo bayo, loo nto ibonisa ukuba awunamqolo.
Ngokwahlukileyo koko, ukuba izinto ozenzayo zivisisana nezinto ozikholelwayo ebomini, akukho nto iya kukujika—kungakhathaliseki ukuba abanye benza ntoni.
UMZEKELO OSEBHAYIBHILENI: Kusenokwenzeka ukuba umprofeti uDaniyeli wayeselula xa “wazimisela entliziyweni yakhe” ukuba uza kuthobela umthetho kaThixo, nangona wayengahlali nentsapho yakowabo. (Daniyeli 1:8) Ngokwenjenjalo, wayimela ngokuqinileyo into awayeyikholelwa. UDaniyeli waphila ubomi bakhe ngokuvisisana neenkolelo zakhe.
ZAZI: Ziintoni ozikholelwayo? Ngokomzekelo: Ngaba uyakholelwa kuThixo? Ukuba kunjalo, kutheni? Bubuphi ubungqina obukwenza uqiniseke ukuba ukho?
Ngaba uyakholelwa ukuba imithetho kaThixo engendlela yokuziphatha yenzelwe ukunceda wena? Ukuba kunjalo, kutheni?
Yintoni wena obungathanda ukufana nayo—igqabi eliphetshethwa lula ngumoya okanye umthi okwaziyo ukumelana nezaqhwithi ezinamandla? Qiniseka ngento oyifunayo ebomini yaye uya kufana nalo mthi. Oko kuya kukunceda ukwazi ukuphendula umbuzo othi, Ndingubani?
Jonga izinto ezintathu obuthe ufuna ukuziphumeza kumbuzo 3. NKusukelo ngalunye onalo, bhala oko uza kukwenza kule nyanga ukuze ulufikelele.
Imibuzo Yabantu Abaselula, Umqulu 2